एक्काशी के भयो ओलीलाई ,डाक्टर नै ओलीलाई देखेर छक्क परे ! – Dainiki Online
March 5, 2021 March 5, 2021 adminLeaveaComment on एक्काशी के भयो ओलीलाई ,डाक्टर नै ओलीलाई देखेर छक्क परे !
‘म आग्रह गर्छु – मेरो स्वास्थ्यलाई लिएर यहाँहरु ढुक्क हुनुहोस्,’ मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिडियो सन्देश जारी गर्दै यिनै अभिव्यक्ति दिएका थिए । दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि ६९ वर्षीय खोली झनै सक्रिय देखिएका छन् ।स्वदेशमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको सक्रियता र आत्मविश्वास देखेर उपचारमा संलग्न चिकित्सक पनि चकित छन् । सामान्यतयाः मानिसको शरीरमा दुईवटा मिर्गौलाहरु हुन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा चारवटा मिर्गौला छन् । ती मिर्गौला मध्ये एउटा मिर्गौलाले मज्जाले काम गरिरहेको छ । त्यही प्रत्यारोपित मिर्गौलाको भरमा उनी सक्रिय छन् ।
मुलुककै सरकारी अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने प्रधानमन्त्री ओली पहिलो अतिविशिष्ट व्यक्ति थिए । ‘उहाँको मनोबल उच्च देखिन्छ । उर्जा झन् बढेको छ,’ मिर्गौला प्रत्यारोपणमा संलग्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय युरोलोजी तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण विभागका प्रमुख प्राडा उत्तमकुमार शर्मा भन्छन्, ‘उहाँको स्वास्थ्य देखेर सन्तुष्ट छु । उहाँको दिनचर्या हेर्दा अचम्म लाग्छ ।’नियमित औषधि सेवन, सामान्य व्यायाम दिनहुँ गर्ने र स्वस्थकर खानपानमा ध्यान दिएका कारण सक्रिय जीवन बिताउन सफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सक एवं वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ प्राडा दिव्या सिंह शाह बताउँछिन्।
२०३२ सालतिर जेलमा पर्दा उनी अल्सरले थलिएका थिए। ४ फागुन २०७६ मा गृहजिल्ला झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘मेरो पेट चार पटक चिरिएको छ। केही अंग काटिएको, फालिएको र फेरिएको छ।’रोेगसँग लड्दै आएका उनलाई प्रत्यारोपण गर्नुअघि अचानक एपेन्डिसाइटिस फुट्यो। त्यो शरीरमा फैलिएको थियो। उनी भेन्टिलेटरमा थिए। चिकित्सकहरूका अनुसार उनी बालबाल बाँचेका थिए। ‘एपेन्डिसाइटिस फुटेर गरिएको शल्यक्रिया रिकभर हुनेलगत्तै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्‍यो।
विभिन्न खालका स्वास्थ्य चुनौती झेलेर आउनुभएको छ’, प्राडा शर्माले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि विदेश जान सक्नुहुन्थ्यो। तर, हामी (नेपाली चिकित्सक र स्वदेशको अस्पताल) माथि विश्वास गरेर शिक्षण अस्पतालमा प्रत्यारोपण गर्नुभयो। स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्साहित गराउनुभयो।स्वदेशमै प्रत्यारोपण गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो।’सानोतिनो स्वास्थ्य समस्या आउनेबित्तिकै विदेश कुदिहाल्ने प्रवृत्ति रहेकामा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशमै प्रत्यारोपण गर्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको डा. शर्माले बताए।दैनिक गतिविधि नियालिरहेकी वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ प्राडा शाह भन्छिन्, ‘बिहानपख सामान्य हिँडडुल गर्नुहुन्छ। मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि उहाँको स्वास्थ्य अवस्था ठीक छ।’ प्रत्यारोपित मिर्गौलाका लागि उनले नियमित औषधि सेवन गर्छन्। त्यसले राम्रोसँग काम गरिरहेको र कुनै संक्रमण नभएको प्राडा शर्मा बताउँछिन्।